« Ny tena apostoly : matoky, mifankatia, tsy matahotra »﻿ - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
« Mutant sy variant » koa ve ny olombelona ? il y a 20 heures
« Ny tena apostoly : matoky, mifankatia, tsy matahotra »﻿
Malala il y a 7 jours
Alahady 2 mey 2021
Alahady Paka 05 B
Asa. 9, 26-31; Sal. 21 ; 1 Jn. 3, 18-24 ; Jn. 15, 1-8
« Ny tena apostoly : matoky, mifankatia, tsy matahotra »
Asongadin’ny vakiteny telo anio izany lohahevitra izany. Tantarain’ny vakiteny voalohany ny fidiran’i Saoly, izay niova anarana ho Paoly, tamim-pitokisana teo anivon’ireo mpianatry ny Tompo. Ny fandraisan’ireo mpianatra azy no vao mainka nanamafy ny fifankatiavana sy ny fahasahiana hitory ny Evanjely. Mbola amafisin’ny vakiteny faharoa izany fifampitokisana sy fifankatiavana izany. Tsy am-bava fotsiny ihany anefa fa aseho amin’ny « asa sy amin’ny fo tokoa », fa indrindra indrindra amin’ny fitoerana sy fifikirana ao amin’i Jesoa Kristy. Ny fanambaran’i Jesoa ny tenany ao amin’ny evanjely (vakiteny fahatelo) no manazava izany fifikirana Aminy izany.
« Tamin’izany andro izany, i Jesoa niteny tamin’ny mpianany nanao hoe : ‘Izaho no tena foto-boaloboka, ary ny Raiko no mpamboly » Jesoa « Mpiandry ondry tsara » tamin’ny Alahady lasa teo. Jesoa « Tena Foto-boaloboka » indray amin’ity Alahady ity. Jesoa miresaka fambolena sy fiompiana. Jesoa mifankahazo resaka amin’ny mpamboly sy mpiompy. Maro samihafa ireo zavatra fahita andavanandro entin’i Jesoa manambara ny tenany: mofon’ny fiainana Izy (Jn. 6, 35); mofo velona nidina avy any an-danitra (Jn. 6, 51); fahazavan’izao tontolo izao (Jn. 8, 12); varavaran’ny ondry (Jn. 10, 7 sy 9); mpiandry ondry tsara (Jn. 10, 11 sy 14); Lalana sy Fahamarinana ary Fiainana (Jn. 14, 6); tena foto-boaloboka (Jn. 15, 1 sy 5). Tsy mba filazana saro-takarina izany fa tsotra sady azon’ny olona miserasera amin’ny tontolon’ny fambolena sy fiompiana. Tontolon’ny tantsaha mpamboly sy mpiompy : fiandrasana ondry, fambolena voaloboka…
« Izaho no tena foto-boaloboka… ». Kisary fampiasa entina milaza ny fifandraisan’ny Tompo Andriamanitra tamin’ny vahoaka Israely ny « fambolena voaloboka » ao amin’ny Testamenta Taloha. « Ny taranak’i Israely no tanimboaloboky ny Tompo, ary ny olona any Jodà no voly nolalainy… » (Iz. 5, 7). Matetika anefa ny vahoaka Israely dia voaloboka nandiso fanantenana. « Nampoiziny hamoa voaloboka tsara izy, kanjo divay marikivy no vokany » (Iz. 5, 2b). Eo anivon’izany karazam-boaloboka marikivy izany kosa no mipoitra ny olona anankiray « tena foto-boaloboka » dia i Jesoa Kristy. Izy no foto-boaloboka tena izy sady maro sampana. Foto-boaloboka manome vokatra maro be, tsara sady mamy…
« … Ary ny Raiko no mpamboly ». Oharin’i Jesoa amin’ny mpamboly ny Ray. Mikolokolo sy manao izay hampamokatra ny voaloboka Izy. Mpamboly mahakolokolo ka manara-maso tsara ny fanirin’ireo sampana misandrahaka avy ao amin’ny foto-boaloboka. « Ny sampana rehetra tsy mamoa eo amiko, hoy Jesoa, dia esoriny, ary izay mamoa dia rantsanany mba hampamoa azy bebe kokoa ». Ireo izay nandà Azy tsy ho Kristy Mpamonjy no toy ny sampana maina tsy mamokatra ka esorina. Ireo apostoly, toy izany koa i Saoly, izay tonga Paoly, apostoly malaza : norantsanan’ny Tompo, teny an-dalana ho any Damasy, ka tonga mamokatra finoana be dia be tany amin’ny tanin’ny Jentily…
« Izaho no foto-boaloboka ary ianareo no sampany ». Ankoatra ny anjara asan’ny Ray mpamboly dia ambaran’i Jesoa ihany koa ny anjara toeran’ireo mpianany. Sampana izy ireo, sampana kolokoloin’ny Ray. Esoriny izay tsy mamoa, rantsanany izay efa mamoa mba hamokatra bebe kokoa. Tsy velona ho an’ny tenany irery ny foto-boaloboka fa velona sy mamelona ireo sampany. Toa ohatra ny tsy ho afaka hamokatra irery ilay foto-boaloboka fa toy ny taho efa maina raha tsy misy sampana. Tsy misy sampam-boaloboka hanome voa anefa raha miala amin’ny tahony. Mifamatotra tanteraka toy izany ny fiainan’i Jesoa sy ny mpianany. Raha tsy mitoetra ao Amiko, hoy i Jesoa, dia tsy hahefa na inona na inona. « Mitomoera ao amiko, ary Izaho hitoetra ao aminareo ». Tsy mitady vokatra ho Azy i Jesoa fa manome kosa ny vokatra ho voninahitry ny Ray. « Ho voninahitra ho an’ny Raiko raha mamoa be ianareo sy tonga mpianatro ».
Ny Fiangonana no sampana nitsimoka avy ao amin’i Kristy foto-boaloboka. Solofo sy dimbin’ireo mpianatr’i Kristy ny Fiangonana. Tsy ho afaka hamoa ho azy ny Kristianina fa ao amin’i Kristy ihany no ahavelomany. Ny fiombonany aina amin’i Kristy ao amin’ny Eokaristia, ao amin’ny Komonio masina, no hanatanterahany ankehitriny ny tenin’i Jesoa hoe: Izay mitoetra ao amiko sy itoerako no mamoa be, satria raha tsy izaho tsy mahefa na inona na inona ianareo.
« Jesoa Tompo ô, osa sy malemy izahay ka mora misaraka aminao, koa ampio hery amin’ny Fitiavanao fa irahinao hiasa sy hitondra vokatra eo amin’izao tontolo izao » (Vavaka aorian’ny Ranombavaka, Sorona Masina Alahady sy andro fety, ed. 2014, p. 419)
Matoan-dahatsoratra : Misafotofoto sy mifamahofaho ! - il y a 20 heures
Fanehoan-kevitra : « Mutant sy variant » koa ve ny olombelona ? - il y a 20 heures
Teny Mahavelona : « Ny tena apostoly : matoky, mifankatia, tsy matahotra »﻿ - il y a 7 jours
Teny Mahavelona : « Jesoa mpiandry ondry tsara » - il y a 13 jours